कैटरिना कैफ पोर्नस्टार नै थिइन् त ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कैटरिना कैफ पोर्नस्टार नै थिइन् त ?
वलिउड नायिका कट्रिना कैफलाई यतिवेला वलिउडमा आउनुभन्दा अगाडि पोर्नस्टार भएको विभिन्न आशंकाहरु व्यक्त भएका छन् । उनको पोर्न फिल्ममेकर टेर्री स्फेन्ससँगको फोटो इन्टरनेटमा भाइरल भयो त्यसपछि सनसनी मच्चियो । उनको यहाँ देखाइएको तस्वीर वलिउडमा आउनुभन्दा अगाडि कै भएको बताइएको छ । यदि यो कुरा साँचो भयो भने सनी लियोन मात्र होइन कट्रिना कैफ पनि पोर्न फिल्मबाटै बलीउडमा आउने नायिकामा गनिनेछिन् ।
सलमान खानको मजबुत सहारा छोडेर उनीले रणबीर कपुरको हात समाइन् जसको साथ उनको सम्बन्ध जहिल्यै धरासय बनेको छ । नितु जो रणबीरकी आमा हुन् उनी यो सम्बन्धलाई लिएर खुसी छैनन् । यदि कैटको बारेमा यो हल्ला साँचो भयो भने रणवीरको सम्बन्ध पनि अन्त्य हुनेछ किनकी पोर्नस्टार भएको पुष्टि भएमा कपुर परिवारले यो कुरालाई कहिल्यै स्वीकार नगर्ने बताइन्छ । टेर्री स्फेन्स नामका यी पोर्न फिल्ममेकर ब्लू मुभिको सिडि वेच्ने गर्थे त्यसपछि पोर्न मुभि बनाउन लागे । यसरी कैटरीनाकी बहिनी इसाबेल पोर्न मुभि मेकरसँग जसरी पोज लिएको देखिन्छ यसले राम्रो संकेत नदिएको अड्कल गर्न सकिन्छ ।
इसाबेल यो भन्दा अगाडि पनि लाइम लाइटमा आएकी छिन् । उनीजस्तै देखिने एक युवतीको सेक्स गरिरहेको एमएमएस इन्टरनेटमा लीक भएको थियो । तर यो कुराको पुष्टि भएको छैन कि ती युवती इशावेल नै हो या अरु कुनै युवती । कैटरिना बलीउडमा आउनुभन्दा अगाडि लन्डनमा एक मोडल थिइन । उनले बुम फिल्मबाट वलिउडमा कदम राखिन जहाँ बोल्ड सीन भरपुर थियो तर फिल्म फल्प भयो । पछि उनलाई सलमान खानको सर्पोट मिल्यो र करियरको गाडी अगाडि बढ्यो । तर कैटले आफ्नो करियरमा बोल्ड तथा इन्टिमेट सिन दिनलाई कहिल्यै पनि लाज मानिनन् ।